दसैंमा मासु खाँदा यी कुराहरुमा ध्यान दिनुस नत्र अस्पतालमा बस्नुपर्ला !! – Janamukhi.com
दसैंमा मासु खाँदा यी कुराहरुमा ध्यान दिनुस नत्र अस्पतालमा बस्नुपर्ला !!
जनमुखी संबाददाता २० आश्विन २०७६, सोमबार
असोज २०, दसैंमा मासु कसरी खाने र कस्तो मासु खाने जानकारी नहुँदा मानिसहरु बिरामी हुने गरेको चिकित्सकहरुले बताएका छन् । दसैंमा मासु र मासुजन्य वस्तुहरु खाँदा यसमा धेरै ध्यान पुर्याउनु पर्ने मुटु रोग विशेषज्ञ डा. भवानी मानन्धर बताउँछिन् ।
“सामान्यतया दसैंको समयमा रातो मासु बढी चिल्लो भएको मासु भएका स्वास्थ्यमा समस्या आउने गर्छ,” उनले भने, “रातो मासुभन्दा सेतो मासु भएका कुखुरा र माछाको सेवनले मुटु रोग निम्त्याउन नदिने हुँदा कुखुराको मासु खानु फाइदाजनक हुने हुन्छ ।” मासु एक कचौरा खाँदैछौ भने त्योभन्दा बढी सागसब्जी खानुपर्ने र फलफूल खानुपर्ने उनको सुझाव छ ।
टी-ट्वान्टी अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा आज नेपाल र नेदरल्याण्डस् भिड्दै
यस्ता छन् शाकाहारी भोजनका बेफाइदा